Haweenay Faransiis ah oo lagu Xukumay 2-Sano oo Xarig ah Sabab ? – Radio Daljir
Oktoobar 8, 2017 4:23 b 0
Gabadhan oo lagu magacaabo Kiristina Rifiyeere oo 51 jir ah waxaa xukunka ku riday Maxkamad ku taalla magaalladda Paris.
Haweeneydaasi oo 51-jir ah laguna naanayso JIHADI GARAN ayaa la sheegay inay 3 jeer socdaal ku tegtay dalka Syria, si ay u soo aragto Wiilkeeda oo lagu magacaabo Tayler Filuus, kaasi oo ka mid ah Dagaalamayaasha Daacish.
dhinaca kale Xukunkeeda ayaa yimid hal toddobaad kadib, markii Hooyo 3 carruur leh lagu helay inay Lacago u xawishay wiilkeeda oo u safray dalka Syria, kuna biiray Daacish.
Maxkamad ku taalla magaalladda Paris ayaa ku xukuntay Haweeneydaas 2 sanno oo Xabsi ah.